ट्रेण्डिङ नम्बर वानमा आईएम वीथ मनिषा कोइराला – Online Nepal
May 21, 2020 228
काठमाडौं । लिम्पियाधुरा सहित समेटेर नेपालको नयाँ नक्शा जारी गरिएको निर्णयलाई मनिषा कोइरालाले स्वागत गरेपछि भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा उनको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । उनलाई निकै तल्लो स्तरमा ओर्लिएर भारतीय मडियाले गाली गरिरहेका छन् । केही मिडियाले उनको विषयमा विशेष कार्यक्रम नै प्रशारण गरेका छन् ।
बिहीबार दिउँसो तीन बजेसम्म यो ह्यास ट्यागमा नौ हजार हाराहारीमा ट्वीट भएका छन् । कोइरालाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको ट्वीट रिट्वीट गरी नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएकी थिइन् । कोइरालाले शान्तिपूर्ण सम्वादबाट यो विषय हल गर्न समेत आग्रह गरेकी छन् । तर, भारतमा भने उनले नेपालको पक्ष लिएको भनी आलोचना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा मनिषासंगै ब्याक अफ इन्डियन मिडिया र लिपुलेक विलंस्स टु नेपाल भन्ने ह्यासट्याग पनि ट्रेण्डिगंमा छ ।
Prevअब देखि भारतको होइन नेपाली किसानले उत्पादन गरेको मात्र तरकारी बजारमा बेच्न पाउने !
Nextमनिषा एक बर्दी बिनाको नेपाली सैनिक, जसले हल्लाइन सिंगो भारतको मुटु
हेटौँडा अस्पतालमा मनोज ढकालको मृ’त्यु
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (60500)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (44811)